Mutauro wechiGerman Vocabulary Kudzidza uye Shanduro yeShoko Rokunyora
Kukurumidza Kunyora Izwi uye Izwi Rokubata Musoro muchiGerman. Mumutambo uyu, iwe uchaona akawanda mazwi echiGerman achifamba panguva imwe chete pachiratidziri. Unofanira kugara uchinyora izwi rekutanga.
Iwe uchawana mapoinzi etsamba imwe neimwe chaiyo uye ucharasikirwa nemapoinzi etsamba imwe neimwe isiriyo. Chikamu ichi chinopera kana rimwe chete remazwi rikarova madziro ekuruboshwe echiratidziri. Kwezvikamu zvitsva, tinya kaviri pachiratidziri. Zvisingasarudzwe mazwi echiGerman muchikamu chega chega, zvinzvimbo zvakasarudzika zvakasarudzika… Nemutambo uyu unonakidza, imi mose muchadzidza mazwi nekuvandudza mamhanyisa ekutaipa pabhodhi.
Kutamba mutambo uyu une Java yakaiswa pa kwenyu yekombiyuta olmalıdır.aks kunyange zvazvo mutambo chidzitiro yokugadza göremeyebilirsiniz.jav kushanyira www.java.com/t kero.
shoko rechiGerman remusoroGerman word memorization gameGerman word learningGerman word writing gameGerman gameGerman gamesKudzidzira chiGerman nemitambo